Bayaan ka soo baxay Duqa jaaliyadda Boqortooyada Sacuudiga 4/8/2017 | Jamaame News Network
Bayaan ka soo baxay Duqa jaaliyadda Boqortooyada Sacuudiga 4/8/2017
Duqa jaaliyadaha qurba joogta beesha Biimaal rugtiisa Jeddah
Ku : Qurba joogta Beesha Biimaal Rugtooda
Ku: Waxgaradka Beesha Biimaal dalka gudahiisa
Ku : Culumaa’uddiinka Beesha Biimaal Rugtooda
Ku : Ururrada Haweenka iyo dhallinyerada dalka ku sugan.
Ku: dhallinyerada ciidanka naftooda u horey inay deegaankooda ka daafaaan Alshabaab.
Anigoo ah Xaaji Cumar Maxamed Cali(Moordi), ka dib markii aan arkey shirarka maalmahaan ka dhaacaayey Moqadisho.
Ka dib markaan arkey in lagu been abuuranaayo Jaaliyadda Jeddah , waxaan go’aansanney markaan xariirro gaar ah ka sameyney odeyda beesha , inay arrintu u baahantahay in caddeemo laga bixiyo.
Haddaba waxaan inta kor ku xusan u caddeynayaa arrimaha soo socdo:-
1- Jaaliyadda Marna lagama yaabo laba ruux oo walaalo ah(ilmo adeerro) iskuna haaysta Saldanadda, inay kala xigsadaan .
2- Qaar ka tirsan jaaliyadda haddii ay sheegteen inay matilayaan ayna shirar kaga qeyb galeen, waxaan halkaan ku caddeynayaa inay keli naftooda iyo danahooda gaarka ah ku matalaan, oo aysan jaaliyadda ka socon.
3- kuwa jaaliyadda magacooda shirarka ku gala waa kuwa muddo 6 bilood hawl gab ku ahaa jaaliyadda gudaheeda iyo dalka Boqortooyada Sacuudiga..
4- Jaaliyadda muddada aan kor kusoo xusey ayay hawsheeda la joojiyey sidii Guddi Fulin dib u habeen loogu sameeyo, ka dib markii uu guddigii ay ku jireen ,ay eedeemo fara badan dadka ka keeneen.
5- Waxaan halkaan ka caddeynayaa guddigii Fulinta ay hawlahii beesha u haayeen ay keentey inay dhaliso kala daadsanaan , iyo iska hor imaad. taasi oo dhalisey inay jaaliyadda noqoto mid u kala qeybsanta ilaa dhowr qeybood hab dhaqan xumo awgeed.
6- Kuwa jaaliyadda matalaadeeda sheeganaayo maanta waa kuwa dano gaar ah dalka usoo aadey, ayada oo qaari ay ku xirteen mid saldanadda sheeganaayo lacagna kaga qaateen sidii shirarka qaar ay ooga qeyb galaan ayaga oo u been sheegaaya inay jaaliyadda Sacuudiga raacsantahay taasi oo been aan raad laheyn ah.waayo jaaliyadda inay is haysato waa inta aniga igu xiran ayna ka go’antahay in la taageero dhallinyerada naftooda hurayaalka ah iyo hoggaankooda.
7-Waxaan caddeynayaa Inay jaaliyadda ay keli teegeero u tahay qofkii wax taro dhallinyerada naftooda hurayaasha ah ee deegaanka ka dhicinaayo Alshabaab iyo waxii xumaato maatada la doonaayo.
8- Waxaan caddeynayaa heshiis kasta ee gobolka laga doonaayo inay keli ka go’do odeyda, culumada, dhallinyerada iyo haweenka ku sugan gobolka Sh. Hoose ee heeganka u ah mar walbo.
9- Waxaan si buuxda u canbaareynayaa kuwa Xamar iyo Afgooye shirar dib u heshiin horey oogu soo galey oo aysan waxba ka socon, haddana leh,”Haddaa megel kooyey”, “waxaan leeyahay timirtii horeyba deb loo waa, ee umadda beenta ka daaya iyo debka aad mar walbo shideysaan, aakhiradiinna u camal fasha, ha ku khaatimo seegina shilinka yer ee aad daba ordeysaan.
10- Qurba joogga waxaan kula talinayaa lacagaha ay idin ka dalbanayaan ku idin biisho, ka waantooba, kuwa walaalaha aad ku kala safaneysaanna kula taliya inay danta beesha u midoobaan , ayaga oo woda socdana beesha hor yimaadaan midkooda meesha ka caddeeya inuu tanaasuley, beeshana markaasi duub cusub saartaa kan kale, amase lagu kala saaraa qof walbo iyo wax qabadkiisa uu beesha wax oogu soo qabtey.
Waa in laga waantoobaa qowlad dhaxdeeda midba afar qof ay ku tiraahdo adigaa suldaan inoo ah, ee waa inay beeshu u woda dhamaato deegaannadeeda oo idil.
Oogu dambeentii waxaan mar kale caddeynayaa jaaliyadda Sacuudiga inaysan marna oggoleen in magaceeda lagu qaraabto laguna been sheegto, mana jirto lacaga ay jaaliyadda ku bixineyso shirarka beesha ay Xamar iyo meel gobolka ka baxsan ay ku bixineyso, amase ay ku bixisey.
Duqa Jaaliyadaha Qurba Joogta Beesha Biimaal – Jeddah – Sauudiga.
Xaaji Cumar Maxamed Cali “ Moordi”